AKON’NY FANKALAZANA NY FETIN’NY PASKA : Olona enina no maty, 55 hafa naratra
Nitombo ny isan’ireo olona tonga nila vonjy teny amin’ny Hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra) nandritra ny fankalazana ny fetin’ny Paska 2017 raha oharina tamin’ny taon-dasa, raka ny fanazavana nomen’ny mpitsabo mpiandry raharaha nandritra ny fety. 18 avril 2017
Nitombo ihany koa, hoy izy, ny isan’ireo olona namoy ny ainy satria tafakatra hatrany any amin’ny enina no fantatra fa maty.
Nanomboka ny sasak’alin’ny Paska nitohy hatramin’ny omaly, andro fitsangantsanganana dia tsy nifanaretsaka ireo olona tonga nila fitsaboana tetsy amin’ny Hjra Ampefiloha. Tao anatin’ireo telo andro nifanesy ireo mahatratra hatrany amin’ny 150 ireo marary nandalo fizaham-pahasalamana teo anivon’ny sampana vonjy taitran’ny hôpitaly. Nisy tamin’ireo no nalefa nody avy hatrany rehefa nahazo fitsaboana ary ny 53 tamin’ireo kosa no tsy maintsy notazonina.
Raha ny tatitra vonjimaika voaray hatramin’ny omaly maraina dia olona enina no fantatra fa namoy ny ainy. Ny telo tamin’ireo no namoy ny ainy vokatry ny hamamoana tafahoatra ka tsy nahatsiaro tena ary tsy tafarina intsony na dia efa nialana tao amin’ny hôpitaly aza. Ny telo ambiny kosa maty tsy tra-drano vokatry ny lozam-pifamoivoizana, ka isan’izany ilay lehilahy maty nazeran’ny môtô teny By-Pass, omaly hariva.
Hatrany any amin’ny 53 kosa ireo naratra. Tsy dia nisy goavana ny ratra nahazo ireto farany fa saika vokatry ny adiady, ny fanendahana ary ny lozam-piarakodia madinidinika niseho teto an-drenivohitra sy ny manodidina.
Tamin’ny ankapobeny azo lazaina ho nilamina ihany ny nanatanterahan’ny vahoaka ny fetin’ny Paska sy ny alatsinain’ny Paska lasa teo iny. Tamin’ity taona ity mantsy dia nihena ny isan’ireo loza niseho. Nihena ihany koa ny isan’ireo olona maty vokatr’izany raha hampitahaina ny tamin’ny taona lasa teo iny. Niara-nihetsika ny mpitandro filaminana rehetra, nandritra ny fifamoivoizana manerana ny lalam-pirenena rehetra sy ny toerana maro teto Antananarivo.